Perihal Piala Dunia 2018 @ Usahawanista :: 痞客邦 ::
Dec 24 Sun 2017 19:43
Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Koobka adduunka 2018 ayaa noqon doona 21-ka Koobka Adduunka ee FIFA, oo ah tartan caalami ah oo kubadda cagta ee tartanka kubada cagta adduunka oo ay ku tartamayaan kooxaha xulalka adduunka ee ururada FIFA. Waxaa la qorsheynayaa in uu ka dhaco Ruushka laga bilaabo 14ka Juun ilaa 15 Luulyo 2018, ka dib markii dalka la siiyay xuquuqda martigelinta 2 December 12, 2010. Tani waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee Koobka Aduunka lagu qabto Yurub ilaa 2006; dhamaantood mid ka mid ah goobaha garoomada waxaa ku yaala Yurub Yurub, galbeed ka mid ah Buuraleyda Ural si loo ilaaliyo waqtiga safarka. Tartanka kama dambaysta ah wuxuu ku lugleeyahay 32 kooxo qaran, oo ay ka mid yihiin 31 kooxood oo lagu go'aamiyay tartamada isreebreebka ah iyo kooxda martigelinta si toos ah u leh. 32 kooxood oo ka mid ah 20ka xul ee ka qeybgalaya Koobka Adduunka ee 2014, ayaa waxaa ka mid ah difaacida horyaalka Jarmalka, iyo Brazil oo ah kooxda kaliya ee ka qeyb gashay tartamada oo dhan, halka Iceland iyo Panama ay labadoodaba Koobka aduunka ee FIFA Wadarta 64 kulan ayaa lagu ciyaari doonaa 12 goobood oo ku yaal 11 magaalo. Finalka wuxuu dhici doonaa 15ka Luulyo ee magaalada Moscow ee Luzhniki Stadium. Guuleystayaasha Koobka Adduunka ayaa u qalmi doona Koobka Confederations Cup ee 2021.
Isku-aadka ayaa la qabtay 1-dii Disembar 2017, saacadda 18-keedii, MSK, oo ku yaala Kremlin Palace ee magaalada Moscow. 32 kooxood ayaa lagu galay sideed kooxood afar. Isku-aadka, kooxaha ayaa loo qoondeeyey afar dheryood oo ku salaysan qiimeynta aduunka ee FIFA ee October 2017. Dhererka 1 waxaa ku jira kooxda martida loo yahay ee Ruushka (kuwaas oo si toos ah loogu magacaabay A1) iyo 7da xul ee ugu wanaagsan, , iyo sidoo kale for Pots 3 iyo 4. Tani waxay ka duwan tahay barbar-dhigtadii hore, halkaas oo keliya Pot 1 oo ku saleysan FIFA Rankings halka dheraadka haray ay ku saleysan yihiin tixgelinta juqraafi. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa heysta xaqiiqda ah in kooxo isku xul ah aysan isku arkin labada koox ee kale, marka laga reebo UEFA oo koox kasta ay ka kooban tahay labo kooxood. Perihal Piala Dunia 2018
此分類上一篇： Perihal SejarahQQ
此分類下一篇： Perihal Bayar Per Klik
上一篇： Perihal SejarahQQ
下一篇： Perihal Bayar Per Klik